Home Wararka Somaliland oo ka hortimid hubkii dalka Shiinuhu siiyay dowladda federaalka
Somaliland oo ka hortimid hubkii dalka Shiinuhu siiyay dowladda federaalka
Xukuumada Somaliland ayaa war ka soo saartay gaadiid dagaal iyo agab ciidan oo Shiinaha ugu deeqday dowladda Soomaaliya, iyadooo agabkan shalay uu la wareegay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Agaasimaha Madaxtooyada Somaliland Mohamed Ali Bille ayaa sheegay in talaabadan ay tahay daandaansi lagu carqaladeynayo xiriirka Somaliland, Taiwan & Maraykanka.
Waxa uu sidoo kale su’aal galiyay xiliga lagu soo beegay bixinta deeqdan oo uu sheegay iney tahay waqti uu madaxweynaha Somaliland socdaalmtodobaad qaatay uu ku joogo dalka Mareykanka, halkaasoo uu kulamo kala duwan ka wado.
“Qalabka millatari ee Shiinuhu u diray ciidanka Soomaaliya, xilli uu Madaxweynaha Somaliland booqasho ku joogo dalka Maraykanka, ma aha wax iska yimi, balse waa daandaansi lagu carqaladaynayo xidhiidhka Somaliland ee Taiwan iyo xidhiidhka ka dhexeeya Maraykanka.” ayuu yiri Agaasimaha.
Previous articleMid kamida saraakiisha hay’adda NISA Gash. Xamdi oo shaqada isaga tagtay. Sabab!
Next articleWeriyayaal ku sugan Hargeysa oo dhaawac ka soo gaaray weerar lagu qaaday awgii
(Sawiro) Xalimo Yarey oo wakiil ka ah RW Cusub & Farmaajo...
Khilaafkii beelaha Muddulood oo xal laga gaaray & shir lagu wado...